कृृषि तथा राेजगार | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
उहाँ बुझेको मानिस हो, त्यसरी पक्ष र विपक्षमा लाग्नु हुन्छ, जस्तो मलाई लागेको छैन: ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं साधारणसभा चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुँदै छ । साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति पनि निर्वाचित गर्ने भएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा महासंघका वर्तमान उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले उमेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
देशको समृद्धि खासमा गाँजामा लुकेको रहेछ ! अन्ततिर खोज्दा खोज्दै हाम्रो पुस्ता बित्यो ।
हिजो त्यो समृद्धि भन्ने जिनिस प्रजातन्त्रमा खोजियो, जङ्गलमा बन्दुक बोकेर खोजियो, स्कुल बसमा बम पड्काएर खोजियो, नारायणहिटीमा पुरेको छ कि भन्ने लाग्यो र कब्जा गरेर खोजियो । तर, पुच्छरसम्म पनि फेला परेन । देश केक जस्तो होइन भनेर खोजियो,…
पत्रकार महिला : ३० वर्ष उमेर पुगेपछि जागिर छाड्ने धेरै
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार देशमा १३ हजार ५० पत्रकार छन् । जसमा महिलाको संख्या दुई हजार तीन सय ५४ छ । यो कुल संख्याको १८ प्रतिशत हो । नेपाली सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार महिलामध्ये ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका पत्रकार…
आज – २३ फाल्गुण २०७६ शुक्रवार को राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । दाम्पत्य जीवनमा एक किसिमको निरसता आउन सक्छ । विचार पुर्याएर निर्णय लिनु राम्रो होला ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को,…
म महासंघमा सक्रिय भएपछि महासंघकै काम र विभिन्न कार्यक्रमका सिलसिलामा पूरै देशभर पुग्ने अवसर पाएँ। ती कार्यक्रममा सहभागी हुँदा तपाईं उद्योगी व्यवसायी साथीहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग औपचारिक अनौपचारिक थुप्रै बसाइँ भए, भेला र बैठकहरु भएँ ।
ती बसाइँ भेला र…
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो खसेपछि सवारी आवागमन प्रभावित बनेको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–६, चारकिलोमा पहिरो खसेपछि सवारी आवागमन प्रभावित भएको हो ।
पहिरो खसेपछि सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, जिल्ला प्रहरी…
पर्यटन बोर्डको सीईओका लागि आवेदन माग
काठमाडौं । पर्यटन बोर्डको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका सरकारले आवेदन माग गरेको छ । बोर्डको सीईओ नियुक्तका लागि गठन गरिएको उपसमितिले बुधबार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै आवेदन माग गरेको छ ।
बोर्डका सीईओ दिपकराज जोशीको कार्यकाल सकिन लागेको नयाँ सीईओका…
काठमाडौं । मन्त्री नियुक्तभए लगत्यै उद्योग मन्त्री मातृका यादवको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रिपरिषदमै भनाभन पर्‍यो।प्रधानमन्त्रीसँग उनको असहमतिको पहिलो विषय थियो- झापाको दमकमा बन्न लागेको औद्योगिक पार्क। यो औद्योगिक पार्क प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। सो पार्क बनाउन…
यस्ता छन, ‘उपनिर्वाचन २०७६ उम्मेदवारका आ–आफ्नै दाबी’
विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षको मृत्यु भएपछि…
काग तिहारको दिन १०० वर्ष पछि जुर्यो महासंयोग ! राशि अनुसार यसरी उठाउनुस् लाभ !
पञ्चाङ्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका अथवा काग तिहारका दिन धनवन्तरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरस मनाउने गरिन्छ । धन त्रयोदशी र धनतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ । यो दिन मूलतः आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि र धनका देवता कुबेरको…
ज्वरो आएर भरतपुर अस्पताल भर्ना भएकी युवतीको मृत्यु 47 views
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुलुक डुवाउने यीनै हुन ? 16 views
अमेरिकामा एकैदिन ९ सय बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या २ लाख नाघ्यो9views
नेपालमा भेटिए कोरोनाको छैटौं संक्रमित9views